Cali Rooba: In ka badan 50% jidadka Mandera waxaa maamulo Al-Shabaab | Xaysimo
Home War Cali Rooba: In ka badan 50% jidadka Mandera waxaa maamulo Al-Shabaab
“Xaqiiqada dhabta ah ayaa ah in aniga oo ah barasaabka dowlad deegaanka Mandera, oo aan ahayn qof shacab ah, isla markaana la ii igmaday in aan maamulo hawlaha dowlad deegaankan ayaa waxaan si cad u xaqiijinayaa in inkabadan 50% waddooyinka deegaankan ay gacanta ku hayaan oo ay maamulaan Al-Shabaab,” ayuu yiri Cali Rooba.
Waxa uu ka codsaday madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta, in uu ka shaqeeyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada amni-darro ee ka jirta deegaanka Mandera.
“Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya in uu xaqiijiyo in saraakiisha ammaanka ay ka shaqeeyaan sidii loo xallin lahaa dhibaatada ka jirta Mandera. Sababtoo ah, waxaan nahay waddan madax-bannaan oo marnaba madax-bannaanideena aan ugu tanaasuleynin in argagixiso ay na maamusho, xilli saraakiishii loo igmaday amniga, heer deegaan iyo heer gobolba ay dafirayaan in xitaa ay dhibaato jirto,” ayuu yiri Cali Rooba.
Onesmus Kyatha oo ah ninka dowladda dhexe mas’uulka uga ah amniga deegaanka Mandera oo la hadlay warbaahinta maxalliga ahi ayaa sheegay in aysan jirin xogtaasi uu shaaciyay Cali Rooba ee ah ah in wax kabdan 50% Al-Shabaab ay maamusho jidadka Mandera, maadaama buu yiri laamaha ammaanka ay mar waliba heegan ku jiraan isla markaana ay ilaalo siiyaan basaska ka shaqeeya waddooyinka isku xira Mandera iyo magaalooyinka kale ee gobolka woqooyi-bari Kenya.